Kulankii Caadiga ahaa Ee Gudiga Fulinta Oo Furmay - Cakaara News
Kulankii Caadiga ahaa Ee Gudiga Fulinta Oo Furmay
jigjiga(Cakaaranews)Talaado 12ka July 2016. Gudiga fulinta XDSHSI ayuu saaka kulankoodii caadiga ahaa si rasmi ah uga furmay hoolka shirarka khaaska ah ee xarunta madaxtooyada.
Kulankan oo uu hogaaminayeen gudoomiyaha XDSHSI ahna afhayeenka golaha xildhibaanada mudane Maxamedrashiid Isaaq ayaa wuxuu ugu horayn soo hordhigay gudiga ajandayaasha kulankan oo ah: soo jeedinta iyo qiimaynta warbixinta XDSHSI iyo waliba warbixinta xukuumada DDSI ee sanadka 2008TI.
Kadibna, waxaa si faahsan warbixintii waxqabadka xukuumada DDSI ee sanadka 2008TI usoo jeediyay madaxawynaha DDSI mudane cabdi maxamuud cumar ahna gudoomiye kuxigeenka XDSHSI iyadoo warbixintii waxqabadka XDSHSI ee sanadka 2008TI si fiican looga dhagaystay madaxa arimaha siyaasada ee xarunta dhexe ee XDSHSI mudane Cumar maxamed cabdi.
Hadaba gudiga ayaa si qoto dheer u qiimeeyay hawlaha horumarka gaar ahaan dhinacyada biyaha, jidadka, dib-udajinta, waraabka iyo dooxooyinka, caafimaadka, waxbarashada iyo beeraha iyagoo dhinaca nabadgalyadana diirada kusaaray xaaladaha Ururada argagixisada ah sida UBBO, Al-itaxaad, Alqushaash iwm. Waxayna dhamaan xubnaha gudiga iyo hogaaminta sare gaar ahaan madaxwayne kuxigeenada ay hoosta kaxariiqeen inay sii xoojinayaan ladagaalanka ururada xagjirka ah.
Dhanka kale, gudiga fulinta ayaa warbixitii uu raisal wasaare hailemariam kajeediyay guriga ugu sareeya xukuumada federalka ee Golaha wakiilada shacabka JDFI kutaageeray in qorshaha lagula dagaalamayo dhimida saboolnimda iyo ladagaalanka xagjirnimada ay sii laba jibaarayaan oo ay hadh iyo habeenba u soo jeedayaan.
Sidoo kale waxay gudiga-fulintu islaqaateen in uu xawli ku dhaqaaqay horumarka deegaanka iyo fulinta awoodeed ee hogaamintuba kadib shirwaynihii XDSHSI ee kal hore kadhacay magaalada Fiiq ee la iskaga sifeeyay qashinkii tareenka horumarka laxaadka kusocda hareeraha haystay. Waxayna gudigu kutilmaameen matoorka dhaqaajiyay horumarka baaxadaa leh inuu yahay hogaamin maskax-caafimaad qabta, dareen wadaninimo, kago’naanshiyo, aragti shacab, iyo mid horumarineedba leh Iyagoo shaqooyinkii nabadgalyadana ku amaanay ciidanka gaarka ah ee Liyuu-boolisku sida ay uga midha dhaliyeen.
Waxayna Hogaaminta sare ee gudiga iyo xubnaha oo kahadlay kulankan oo ay kamid ahaayeen: marwo Sucaad Axmed Faarax, mudane Cabdixakiin Cigaal Cumar, mudane Mawliid Haayir Xasan, mudane Cabdicasiis Maxamed Cabdi, mudane Jamaal Axmed Qaloonbi, mudane Maxamed Daahir, mudane Khadar Cabdi Ismaaciil, mudane Cabdi Cali Mataan iyo dhamaanba kunuux-nuuxsadeen islamarkaana si adag carabka ugu dhufteen inay xagjirnimadu tahay cadawga kali ah ee caqabada ku ah horumarka gaar ahaan Al-itaxaad oo ah kadhalay dhamaan argagixisada sida alqushaash, Ubbo, buku-xaaraam, daacish iwm.
Sikastaba ha ahaatee madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar ayaa hoosta ka xariiqay in qorshaha lagu tirtirayo saboolnimada, xagjirnimada iyo ladagaalanka dulsaarnimada oo lasii labo jibaaro ay yihiin tabta kali ah ee lagaga guulaysan karo dhibaatooyinka cadawga saboolnimada iyo argagixisadaba.
Ugudanbayna gudoomiyaha XDSHSI ahna afhayeenka golaha xildhibaanada mudane maxamedrashiid Isaaq oo ladardaarmay xubnaha gudiga fulinta ayaa xagjirnimada ku tilmaamay inay caqabad kutahay dhaman dunida islamarkaana ay lagama maarmaan tahay in si wadajir ah loola halgamo iyo waliba in lasii xoojiyo lagana midho dhaliyo qorshayaasha horumarineed ee sanadaha inagu soo aadan si dalkeenu uga mid noqdo wadamada uu dhaqaalahoodu dhex-dhexaadka yahay.